Eastern Cape Department of Health - INTETHO YOHLAHLO LWABIWO-MALI NOMGAQO-NKQUBO 2020/2021
INDLU YOWISO-MTHETHO YEPHONDO YEMPUMA KOLONI
Somlomo Obekekileyo noSekela Somlomo Obekekileyo
Malungu Abekekileyo eBhunga Elilawulayo
Malungu Abekekileyo eNdlu Yowiso-mthetho yePhondo
Sihlalo weKomiti ejongene nemisebenzi yezeMpilo
Iinkokheli zemveli nabathanjiswa bakwaLizwi
Iibhodi zezibhedlele neekomiti zeekliniki
Abathathi-nxaxebha kwimicimbi yeSebe; kunye
Neendwalutho, Molweni kuni nonke.
Malungu Abekekileyo, singungelene apha ngexesha elimangalisa ngokungenambaliso ebomini bethu, nalapho ilizwe liqubisana nobhubhane iCovid-19. Ndithi thaca le ntetho yomgaqo-nkqubo kwisithuba esingaphezulu kweenyanga ezimbini emva kokuba bendicwangcisele ukuyithi thaca yaye ndiyithi thaca ndisebenzisa uqhagamshelwano lobuchwepheshe nto leyo ekwasisikhumbuzo sokuba undalashe yinto yamhlamnenene. Sithetha nje, iphondo lethu lihleli kwindawo yesithathu kulo suleleko ngulo bhubhane apho abantu abosulelekileyo bangamawaka amabini anamakhulu amane anamashumi amahlanu anesithoba (2 459), kwasweleka abangamashumi amahlanu anesithathu (53) kwaze kwaphila abaliwaka elinamashumi amathathu anesithandathu (1 036) kwabo bebesulelekile yaye eli nani lisakhula. Lo bhubhane uguqule ubomi bethu ngokumandla yaye wanyanzelisa inguqu egqibeleleyo yoko besikucwangcise tanci ebesiza kwenza kunyaka wokuqala wolawulo lwesithandathu wexesha lolawulo lwentando yesininzi eMzantsi Afrika.
Susela ukubhengezwa ngokusesikweni kweMo yeNtlekele nguMongameli Ramaphosa ngenxa yeCovid-19 ngomhla wama-22 kweyoKwindla 2020, sibila sisoma siyila iqhinga lokunciphisa ukunwenwa kwale ntsholongwane nokuthomalalisa ukukhula kosuleleko. Imiqathango ebhengezwe nguMongameli equka ukuhlamba izandla, ukuqelelana kwabantu, ukuvalwa kwezikolo phambi kwexesha nokubhengezwa kwezinga lesihlanu (5) lokumiswa ngxi kweentshukumo zoluntu, kuncedile kakhulu ukulawula lo bhubhane ephondweni.
Icebo lethu elihlaziweyo lokuqubisana nobhubhane iCovid-19 lishwankathelo ngokulandelayo:
· Iinjongo eziphambili zeli qhinga kukophula ityathanga lolosuleleko nokuthomalalisa ulwamvila lokufa okubangelwa yiCovid-19, inkxaso yoluntu, nokuphazamiseka kwezoqoqosho;
· Ukususa usuleleko lamathuba amancinci kusetyenziswa ukulandelelwa kwabantu abosulelekileyo, ukuzichwethela bucala kwabantu nokuziguzula ebantwini.
· Ukuphungula nokucinizelela uqhambuko lobhubhane kwezona ngingqi zichaphazelekayo kusetyenziswa ukuhlolwa ezilalini nakwiindawo ezinabantu abaninzi, ukuziguzula ebantwini, ukuvavanywa kwabantu abaninzi, nokuchwethelwa bucala kwabantu.
· Ukuhlasela iindawo ezongamelwe ngubhabhane ngokuvavanya abantu abaninzi; ukuchwethela bucala abantu; nokumiswa ngxi kweentshukumo zoluntu kwiindaw oapho usuleleko luxhomilengokwewadi, ilali, udederhu lweevenkile, neendawo ekuphangelwa kuzo; kunye
· Nokuthintela usuleleko lwabantu abwela imida kusetyenziswa uhlolo, uvavanyo, ukuziguzula ebantwini nokuchwethela bucala abahambi abawela imida nabo bafulathela iphondo. Somlomo Obekekileyo namaLungu Abekekileyo, ekuqubiseni namanani osuleleko anyuka ngokuxhomisa amehlo, siyile iqhinga eligxile eluntwini – iMasiphathisane. Eli qhinga limiselwe ukuvuselela iqhinga likarhulumente i-IGR War room yaye isekelwe kwezi ntsika zilandelayo:
- Uphumezo leli qhinga liqhutywa liqela elimiselwe ungenelelo lovavanyo.
- Izigulane ezifunyaniswe zineCovid-19 zichwethelwa bucala okanye zilaliswe esibhedlele.
- Abo bathe bahlangana nabo bafunyaniswe beneCovid-19 baye bahlolwe yaye baguzulwe kwabanye abantu kude kube kanti iziphumo eziqinisekisa imo yabo yempilo ziyakhutshwa.
Icebo lethu lihambelana nelo lokusebenzisa iintshukumo eziphumezwa ndawo yonke, kusetyenziswana noluntu ukuphawula abantu abasebunciphekweni bosuleleko, bazizwe kunyango, kulandelelwe abo bahlangene nabo bosulelekileyo, ukulingiselela izibhedlele neekliniki, nokulolonga abasebenzi bezempilo ekulawuleni ukunyuka kwenani lezigulane.
Siyakholwa ukuba eli cebo lizakusinceda sizinzise la manani anyukayo osuleleko yaye lizakusinceda sinciphise inani losuleleko. Kufuneka sizeke mzekweni kwintetho eyenziwe nguMlawuli Jikelele weQumrhu lezeMpilo leHlabathi, xa ebethe: “Lo bhubhane angatyhalelwa emva, kodwa kungenzeka ngokubambisana nangeqhinga lokutsala ngaxhatha linye eliphathisana nazo zonke iinkalo zikarhulumente.”
Njengoko siphawula eli xesha lesingqala elizweni lethu, iQumrhu lezeMpilo leHlabathi (WHO) lisikhumbuzile ukuba ukwanda kwale ntsholongwane kungalawuleka kakhulu okanye kupheliswe ngokuphunyezwa kweentshukumo ezingqingqwa zokulawulwa kokwanda kwalo bhubhane.
Ndichulumancile ukubhengeza ukuba kwa phambi komhla we-11 kweyoKwindla 2020, ndabamba indibano Noompondozihlanjiwe bezeMpilo ukuba sicwangcise kwangethuba ukuqinisekisa ukuba onke amaziko wethu empilo anezixhobo zokuhlola nezokuvavanya. Sizakubanawo amaqela kwizinga leNqila ezizakuphendula ngokukhawuleza kwiimeko zosuleleko nangephanyazo kwabo bachaphazelekayo. Icebo lethu lokuqala beligxile kwiingiqi ezintathu eziphambili: Ulawulo, Uthintelo losuleleko nokulandelela abo bathe bahlangana nabo bosulelekileyo
Lo bhubhane ugqamise ezinye zezinto inkqubo yezempilo kawonke-wonke esilela kuzo, nto leyo esiqhubela ekubeni siphucule ezo zinto sisilela kuzo yaye kuthi chatha ukulangazelela iNHI – Siyingxamele Somlomo. Abantu bethu bafanelwe ziinkonzo zempilo ezisemgangathweni ngokufanayo nabo banakaho ukuhlawulela inkonzo yempilo yabucala.
Somlomo, mandiqhwabele izandla uMphathiswa weMisebenzi yoLuntu, ngokuthi sisengele thungeni linye kwimbono yongenelelo oluzakuqhuba ixesha elide kumaziko wethu. Sisebenzise ixesha lokuhlaziya ngaphezulu kwamaziko ethi empilo angaphezulu kwamashumi amabini anesihlanu (25), ngendlela ehambelana neNHI, ngeli xesha sihoyene nobuzaza beCovid-19. Bekuchulumancisa ukuva uMongameli ewamkela amavela tanci akumila kunje.
Indlela eyoyikisayo, enkwantyisayo nengenasiqinisekiso ubhubhane iCovid ethe yazazisa ngayo ayikhange imphose urhulumente, koko iye yanegalelo kumiba ixovulwayo ngoqhankqalazo kwamanye amaziko empilo. Ukususela ngoko, siye sakwazi ukuqinisekisa ukubandakanyeka kwamahlakani wethu oluntu oku kusenziwa ngeendibano zeveki zoMphathiswa-Nabasebenzi nalapho kushukuxwa ukuqeshwa kwabantu, unikezo lwee-PPE nokugqugula njengeempendulo zikarhulumente kwiCovid.
Nkosikazi Somlomo, ixatha labasebenzi eldingekayo ukulwa lo bhubhane linyanzelise ukuqeshwa kwabongikazi abangamakhulu asibhozo anamashumi amaibini anesibini (822) akwisivumelwano sengqesho ixesha elingangonyaka notyalo loogqirha baseCuba abangamashumi amabini kwiphondo lonke. Ukuzokuthi ga ngoku, iSebe lifumene (R351 651 million)* ukulwa iCovid eMpuma Koloni. Siyaqhubeka nokubhengeza iinkcukachamanani zethu yonke imihla sisebenzisa uMphathiswa kuZwelonke nabasebenzi bethu bayaqhubeka ukusebenza ngokuzimisela okukhulu bengamaqela alandelela usuleleko nahlolayo.
Izibophelelo ezinzwe kwintetho yokugqibela yomgaqo-nkqubo
Somlomo namalungu Abekekileyo, nangona sigxile kwiCovid-19, umsebenzi wesebe kumele uqhubeke. Ndicela undivumele ukuba ndinekeze ingxelo emfutshane yoko kwenziwe ngempumelelo ngokuphathelele kwiimbophelelo endazenzayo kwintetho yam yomgaqo-nkqubo edlulileyo ndiqala ngeentsuku ezilikhulu (100) ndikwesi sikhundla.
1. Siphucule umgangatho wokutya kwasesibhedlele ngokuthi iingcali kwiindlela ezisempilweni zokutya ibezizo ezibhala ukutya okumele kutyiwe zizigulane yaye zither gqolo ukuhlola ukutya neendlela zokutya zezigulane. Imingeni ejongene nentengo yokutya igqithiselwa Kwikomkhulu.
2. Siye sasingatha ngokuyimpumelelo enkulu inkqubo Ezifikelela Eluntwini kwiiNqila ezintathu, Alfred Nzo, Buffalo City, neChris Hani. Senze inkqubo apho besingena kumzi ngamnye kuzo zonke iinqila saze sanikela ngezitulo zamavila nezinye izixhobo ezincedisayo kwabo bagugileyo nabasweleyo.
3. Kuye kwaqeshwa Ingqonyela entsha eButterworth Hospital ukufaka intsontela kulawulo kwesa sibhedlele. Siye senza luqilima ukhuseleko kwesa sibhedlele ukuqubisana ikakhulu nabantu abangena kwesa sibhedlele benezinye izizathu ngaphandle kokufuna uncedo lwezempilo. Akukho zigulana zilala kwesi sibhedlele kuba zilinde ukuncedwa kwakusa susela oko sithe sabeka le migqaliselo. Siyaqhubeka nokuxhasa esi sibhedlele ukuba sibeliziko elitshatsheleyo leeNkonzo zeMpilo zeeNqila.
4. Sibambisene noMongameli, Ohloniphekileyo uMongameli Ramaphosa, uMphathiswa kuZwelonke uMkhize, uSekela Mphathiswa wakhe kuZwelonke uPaahla neNkulubaphathiswa yethu, Obekekileyo uMabuyane, sityhutyhatyhutyhe iNqila iOR Tambo sivula iiKliniki Ezigqibeleleyo ezisibhozo (8) zeNHI. Oku kuqinisekise ukuba kuphucuke izinga lokufekelela kwabantu kwiinkonzo zempilo kweyona nqila yethu inkulu, iOR Tambo. Iingqingqi ezimaphandleni ngoku ziyafikelela kubuchwepheshe bonyango bale mihla yaye kunikezwa iinkonzo ezingcono.
5. Ingqungquthela yezeMpilo ibisingathiwe kunye nabathathi-nxaxheba ukuqinisekisa ukuba intsebenzo yethu silisebe iyaphucuka yaye siyakwazi ukuqubisana ngqo nezidingo ezichanekileyo.
6. Ukulungisa umcimbi wokunqongophala kwabasebenzi, siqeshe abongikazi nabancedisi abangamakhulu amathathu anamashumi amathathu anesithathu (333) ebebefudula bengaphangeli nababhalisiweyo, abongikazi abangoompondo zihlanjiwe abangamakhulu amabini anamashumi amabini, kunye nabasebenzi abalikhulu elinamashumi amabini anesibini abangengabo abanyangi kwiintsuku zokuqala ezilikhulu kwesi sikhundla.
IMPUMELELO KUHAMBISO LWEENKONZO
Malungu Abekekileyo, ukongeza kwiimpumelelo zeentsuku ezilikhulu zokuqala ndikwesi sikhundla nezibhentsiswe ngentla, ngoku ndifuna ukugqamisa eminye imisebenzi ephume izandla yesebe kunyaka u2019/2020.
Ngokuphathelele kuHlaziyo Lweenkonzo Zokuqala Zenkathalelo yezeMpilo (RPHC), isebe liqhubekile nokuqhubela phambili inkqubo zokulungela iNHI kwiphondo lonke. Kwenziwe inkqubo ezifikelela ezimbaxa nezinolwamvila kuzo zonke iinqila zeMpuma Koloni. Injongo kukwandisa ukufikelela kwiinkqubo zempilo ezimbaxa zeenkonzo zokuQala zeNkathalo yezeMpilo kuluntu oluhlala kude kumaziko ezempilo. Iintshukumo eziququzelelwayo ziquka (1) ukuhlolelwa iswekile, uxinzelelo oluphezulu lwegazi, nezinye izigulo ezinganyangekiyo (2) uvavanyo lwentsholongwane kaGawulayo, (3) ezempilo zomlomo, (4) ezempilo zamadoda, (5) ezempilo zamanina kunye (6) uvavanyo lwamehlo. Oogqirha babayinxalenye yamaqela yaye ukumemelela abantu ukuba baye kwiingcali nakumaziko ezempilo akufuphi kuyakhawuleziswa xa kukho imfuneko yoko.
Ekupheleni kweyoMnga ngowe-2019, isebe belinoNoompilo abangamawaka amathathu anamakhulu asithoba anamashumi asixhenxe ananye (3 791) abayinxalenye yamaQela aseWadini Afikelela eLuntiwini (WBCOT) anikeza iinkonzo kwiiwadi ezingamakhulu asixhenxe aneshumi asephondweni. La maqela atyelela abantu emakhayeni wabo yaye abhalisa abantu elungiselela iNHI. Ekupheleni kweyoMnga ngowe-2019, bekutyelelwe amakhaya angamawaka angamashumi asibhozo anesithandathu anamakhulu asixhenxe anamashumi asibhozo ananye (86 781). Ukongeza, kwangaxesha nye, ooNompilo abangamawaka amabini anamakhulu amabini aneshumi (2 210) alolongelwa ukuphawula abo baguliswa kukungawatyi ngokukuko amayeza wabo, nokuhlolela ukubona kwangethuba izifo nokumemela kwangethuba ukuba abantu baye kumaziko ezempilo abanokufumana kuwo uncedo.
Enye inkalo ebalulekileyo yeRPCH yiIntergrated School Health Programme. Kunyaka u2019/2020 ukuzokuthi ga ngoku, abongikazi abangamakhulu amahlanu anamashumi amathathu ekuquka kubo abongikazi abangoompondo zihlanjiwe abalikhulu elinamashumi asithoba anesine nabongikazi ababhalisiweyo baye bangena kwisivumelwano sengqesho kwinkqubo yeIntergrated Health Program nasekunikezeni kwesigonyo iHPV yokuthintela umhlaza kubantwana abafunda ibanga lesine.
Ngokuphathelele kumaqela eeNgcali zoNyango zeeNqila (DCT), iphondo linala maqela kuzo zosibhozo iinqila ngokuphathelele kubongikazi bePHC, Ababelekisi, kunye nabongikazi abazingcali kwicala labantwana. Kusamele someleze iingcali kwezabantwana, kwezokubelekisa nakwimpilo yabantwana kwezempilo zamanina, nakwezemithambiso yemizimba. Kwiinqila iOR Tambo, Alfred Nzo, neJoe Gqabi. Ezi ngcali zinikeza ngololongo lwezonyango nohlolo novavanyo; ukuxhasa imisebenzi yolawulo ekwizinga lenqila, ukuqinisekisa ukusebenzisana, unxibelelwano nokunikeza ingxelo.
Isebe liyaqhubeka nokuphumeza iCentralized Chronic Medication and Distribution (CCMDD), neyinkqubo ejolise ekuphuculeni ukufikelela kwabantu kumayeza ezigulo ezinganyangekiyo zizigulane ezikwimo yempilo ezinzileyo. Olu ngenelelo luqubisane nokuphungula ukuphuphuma kwezigulane kumaziko ezempilo kokuvelisa iindlela ezimiselweyo ezikhawulezayo kumaziko ezempilo nasekumiseleni indawo zokuthatha amayeza (PUP) ezingaphandle kwezakhiwo zempilo. Ekupheleni kweyoMnga ngowe-2019, bekukho izigulane ezingamawaka angamakhulu amathathu anamashumi amathathu anamakhulu amathandathu aneshumi elinesixhenxe (330 617) ezibhaliselwe iCCMDD nalapho kuzo ezingamawaka alikhulu anamashumi asixhenxe anesithathu anekhulu elinamashumi amahlanu anesine (173 154) zifumana amayeza wazo ngale nkqubo. Isebe likwanyuse iindawo zokuthatha amayeza ezingaphandle zaya kuthi ga kwikuhlu elinamashumi amane anesibhozo (148).
Ukubakho kwamayeza azizilandela-mkhondo kumaziko ezempilo kunyukile ukusuka kumyinge wama-85% ekupheleni kweenyanga ezine zokuqala zonyaka zonyaka u2019/20 ukuya kumyinge wama-92% ekupheleni kweenyanga ezisithoba zika2019/20. Ngaphandle kokuba kanti kugatywa le mpumelelo, umngeni wokuphela kwamayeza ngenxa yokuhlaziywa kwemvaba yethu yamayeza eMthatha kuyaqhubeka nokusijamela.
Sikwameleza ezolawulo zangaphakathi ukwenza amayeza afikelele kumaziko ezempilo ngokuthe chatha kunye nokudluliselwa kwemingeni kwabo bangasentla ukuze sikwazi ukungenelela siqinisekise ukuba zonke izigulane eziza kumaziko ezempilo agoduka namayeza eziwadingayo.
Ekupheleni kweenyanga ezisithoba zokuqala zika2019/20, isebe belibhalise abantu abazizigidi ezi-6.1 okanye (ama-84%) abantu bephondo iMpuma Koloni kwiNkqubo yoBhaliso yeMpilo yeziGulane (HPRS).
Somlomo Obekekileyo, umzila weziseko zempilo ezindala nezinganakwanga lo rhulumente owaye wafumana ulawulo lwazo ngowe-1994 uzakuhlala nathi ixesha elide ingakumbi ngenxa yokuqhubeka kokuncipha kwengxowa yemali nokukhokelela kuncphiso lwenkcitho-mali. Noxa kunjalo, siye sahlabela mgama ngokuphathelele kuhambiso lweziseko zophuhliso zempilo. Kummandla iChris Hani, sihlaziye Komani Psychiatric Hospital Psychiatric Ward 15 neendawo zokuhlala oogqirha ezimbini kwesa sibhedlele, kunye neFransbury Clinic ngemali ezizigidi ezingamashumi amabini eerandi. Ngapha koko, sigqibe ukulungisa indawo yokuhlala yoompondo zihlanjiwe bezempilo eWilhem Stahl Hospital eMiddelburg ngemali ezizigidi ezintandathu zeerandi.
Kwinqila iJoe Gqabi, sifake uphahla olutsha saze salungisa nezinye izinto eMaclear Hospital ngemali exabisa izigidi ezisithoba zeerandi saze salungisa izinto ebezifuna isihoyo esingxamisekileyo eEmpilisweni Hospital ngemali exabisa izigidi ezingama-13.3 eerandi. Kwinqila iNelson Mandela, icandelo lokuxilonga abo baphazamiseke ngokwasengqondweni lihlaziywe ngamashumi amabini eerandi ePE Provincial Hospital. Kwinqila iBuffalo City Metro, sihlaziye amagumbi ezigulane eNkqubela TB Hospital ngemali exabisa ishumi elinesihlanu leerandi. Sakhe iHamburg Clinic entsha kwinqila iAmathole ngemali exabisa amashumi amabini anesihlanu eerandi, sahlizaya iWillowvale CHC ngeshumi elinesine lezigidi zeerandi, saze sabiyela yaye sakha nendlu yoonogada eSS Gida Hospital ngemali exabisa izigidi ezintlanu zeerandi.
Somlomo Obekekileyo namalungu Abekekileyo, mayelana nomolomo wethu noGawulayo nentsholongwane yakhe nesingafuni ukugoba iphondo kuwo, siye saphumelela ekwenzeni uvavanyo lentsholongwane kaGawulayo kubantu abasisigidi esinesiqingatha kunokuvavanywa kwabantu abasisigidi esinamakhulu amabini amawaka ebekujoliswe ukuba bavavanywe ekupheleni kweenyanga ezisithoba zokuqala zika-2019/20.
Sikwazile ukufikelela kweli nqaku ngokuthi kuvavanywe abantu kumaziko ezempilo nasekuhlaleni nto leyo esiyenza namahlakani esibambisene nawo. Siye sabhinqa omfutshane nakwimizamo yethu Yoluleko noVavanyo Oluququzelelwa nguMongi (PCIT) kwinqanaba leziko lempilo neliqinisekisa ukuba iHCT (Ululeko noVavanyo lentsholongwane kaGawulayo) kuyinto elindeleke ukuba yenzeke kulo lonke unyango nabongi bempilo.
Isebe likwazile ukukhupha iikhondom zamadoda ezizigidi ezingama-59.9 ekupheleni kweenyanga ezisithoba zokuqala zika-2019/20, kodwa noxa kunjalo injongo yethu yokukhupha iikhondom ezizigidi ezingamashumi asibhozo anesiqingatha ayikhange ifezeke. Oku kubangelwe yimingeni yokuveliswa ngokwaneleyo nokuthuthwa kweekhondom kunye nokungashicilelwa ngokugqibeleleyo kwezo zikhutshiweyo Kwindawo Zokuqala Ezikhutshwa Kuzo (PDS).
Amalinge wethu okulwa usuleleko lomntwana yintsholongwane kaGawulayo eyifumana kunina aqhuba kakuhle. Ekupheleni kweenyanga ezisithoba zokuqala zika2019/20, siphumeze uvavanyo lwePCR yeentsana ngaphantsi kweenyanga ezimbini kwizinga elingu 1.1% xa kuthelekiswa nezinga elingu-1% ebekujoliswe ukuphunyuzwa lona. Oku kwenziwe kwayimpumelelo ngenxa yongenelelo olufana nokuphunyezwa ngokuyimpumelelo kweFixed Dose C ombination (FDC) koomama abakhulelweyo nokuqaliswa koomama abakhulelweyo ukuba batye amachiza alwa ulwamvila lweentsholongwane kaGawulayo (ART). Malungu Abekekileyo, ekupheleni kweenyanga ezisithoba zokuqala zika-2019/20, izigulane ebezisitya iART bezingamakhulu amahlanu amawaka anamawaka alishumi elinesithoba namashumi amathandathu anesihlanu okanye umyinge wama-86.9% xa kuthelekiswa nenani ekujoliswe kulo lalo nyaka umiyo nelingamakhulu amahlanu amawaka anamawaka angamashumi asithoba anesixhenxe anamashumi asithoba. Silisebe sifumanisa ukuba noxa sivavanya izigulane yaye siphumelele emagqabini kumanqaku wethu, asiqhubi kakuhle xa sijonga kumanani esiwavavanyayo. Oku Malungu Abekekileyo, kuthetha ukuba kumele ukuba sigxile ngokumandla kumaqela asekungciphekeni osuleleko, uninzi lwabo ngamadoda.
Njengenxalenye yokukhangela izigulane ezidukileyo zesifo sephepha, isebe lihlole izigulane ezizigidi ezi-5.9 kunezo zi-5.5 bezijolwe ukuhlolwa ekupheleni kweenyanga ezisithoba zokuqala zika-2019/20. Kwaba bahloliweyo, abangamawaka alishumi elinesithandathu anekhulu elinesishumi elinesine elinanye (16 141) bafunyaniswe benesifo sephepha, abangamawaka alishumi elinesihlanu anamkhulu asixhenxe anamashumi asithoba baqaliswa ukunyangelwa isifo sephepha, kwabe kanti ngolo hlobo kuqaliselwa unyango abantu abakumyinge wama-98% xa kuthelekiswa nomyinnge wama-95% ubusikelwe lo nyaka umiyo.
Noxa kukho le mpumelelo iphathelele kwisifo sephepha esinkunzela amachiza, sisambethwe lilifu elimnyama lokuphulukana nezigulane ngenxa yokungalandeleleki kwazo emva kokuba zigqibile ukutya amachiza onyango. Ekupheleni kweyoMnga ngo-2019, izinga lezigulane zesifo sephepha ekuphulukenwe nazo ngenxa yokungalandeleleki kwazo emva kokuba zigqibile ukutya amachiza onyango belikumyinge we-12.8% xa lithelekiswa nomyinge ebekujoliswe kuwo wesi-7%. Ukuqubisana nalo mngeni, isebe lizakuqhuibeka nokuphumeza iinkqubo zasemsebenzini neenkqubo zesifo sephepha kwimimandla yamafama eSarah Bartman.Isebe lisebenzisana namahlakana ohlumo, likwenza luqilima iintshukumo zokuxhobisa uluntu kwiinqila ezichaphazelekayo kusetyenziswa iinkqubo zikanomathotholo bezikhululo zoluntu kukwasetyenziswa amakhasi onxibelelwano ukufundisa uluntu ngokubaluleka kokugqiba amachiza okunyanga isifo sephepha nokuya kwangethuba kumaziko empilo xa umntu ebonakalisa ukuba neempawu zesifo sephepha.
Ekupheleni kweenyanga zokuqala ezisithoba zika-2019/20, kuhlolwe umhlaza wesibeleko kumanina angamawaka angamashumi asibhozo anesibhozo anamakhulu amane anamashumi asithoba (88 490) aneminyaka engamashumi amathathu nangaphezulu nto leyo ebeka izinga lamanina ahloliweyo kumyinge wama-83% xa kuthelekiswa nama-70% ebekujoliswe ukuphumeza wona. Ukusetyenziswa kovavanyo lwezigulo kusetyenziswa amanzi ibenegalelo kwizinga elinyukileyo lohlolo njengoko kuqubisana nemingeni ebikujongenwe nayo ngenxa yamakhwiniba kuvavanyo lwesibeleko okanye izinga eliphezulu lokukhatywa kovavanyo lwesibeleko.
Amalinge okuqinisa ukuthintela nokubhaqa kwangethuba kwezi ntlobo zomhlaza ayaqhuba yaye ziquka isigonyo iHPV kunye namaphulo okuzihlola kwabantu amabele.
Ukongeza koku, isebe enze kwafikeleleka ngakumbi kwiinkonzo zeColposcopy ukunyanga ukusikeka kwesibeleko okwenzeka phambi kokuba ubani abenomhlaza kwizibhedlele ezilishumi elinesihlanu yaye oku kuphucule ukufikelela kwabantu kwezi nkonzo yaye kwanciphisa umgama ohanjwa zizigulane ukuze zifikelele kwezi nkonzo nebezifumaneka kuphela kwizibhedlele iNelson Mandela Academic, Frere, Cecilia Makiwane, Dora Nginza neFrontier. Ezi nkonzo ziye zenziwa ukuba zifikeleleke ngakumbi kokuthi zifumaneka kumaziko empilo ezilishumi kuquka iSt Elizabeth Hospital.
Kunyaka u2019/20, iphondo liye laneenkampu ngaphakathi kwizibhedlele ngeempelaveki kwizibhedlele ezithile zengingqi ukuqubisana nomthwala omninzi. Inkampu yolungiso-mathambo nezihlunu yayiye yaqhutywa eCecilia Makiwane ngeyeThupha ngo-2019 apho bekutyandwa khona izigulane zamathambo nezihlunu ezilishumi elinesithoba. NgeyeDwarha ngo-2019, iFrontier Hopsital, nayo yabanenkampu apho kwatyandwa khona kugutyulwa urhatyazo kubantu abalikhulu elinesithathu (103) kwaze kweyoMnga ngo-2019 kwenziwa izihlandlo ezingamashumi amathandathu anesithathu utyando jikelele olukhulu.
La maphulo azise ukukhululeka okumandla kwizigulane neentsapho zazo, yaye egameni lesebe nabantu baseMpuma Koloni, ndingathanda ukubulela oogqirha abaye bathatha inxaxheba kwezi nkampu.
Ngokuphathelele kwiinkozo zempilo zengqondo, izimvo ngexesha kwakusingathwe Ingqungquthela yezeMpilo yePhondo zazikhokelwa yiNtloko yePhondo noGosa kwezeMpilo zeNgqondo. Icandelo Lokuhlolwa lweeYure ezingama-72 elineebhedi ezingamashumi amane nebelijongwe ngamehlo abomvu laye lavulwa Epe Provincial Hospital. Siqeqeshe amagosa alikhulu elinamashumi asixhenxe anesibhozo aquka abaphathi kwezonyango, amagosa ezonyango nabongikazi bePHC kwezeMpilo zeNgqondo Nokusetyenziswa ngokugqithiseleyo kweziyobisi kuquka amagosa angamashumi amathandathu aquka Amagosa ezeMpilo nabongikazi bePHC kuNyango Lwezigulane eziphazamiseke ngengqondo.
Oonobhala Abazingcali KwezeMpilo zeNgqondo abathathu bagqibe uqeqesho lwabo apha enyakeni bephantsi kweliso elibukhali baze bonyulwa ukuba baphangele eDora Ngiza Hospital naseNelson Mandela Academic Hospital. Kuye kwaqeshwa ingcali kwezempilo zengqondo eCecilia Makiwane Hospital.
Inkonzo yethu yokufakwa kwesixhobo esincedisa ukuva eMthatha Central Hospital kuhlabela mgama. Ukufakwa kwesixhobo esincedisa ukuva kwenziwe izihlandlo ezisibhozo ngonyaka u-2019/20 yaye siceba ukwandisa ukufumaneka kwale nkonzo nto leyo eyakunciphisa ukuxhomekeka kwethu kwiphondo iNtshona Koloni elisebumelwaneni. Malungu Abekekileyo, sifuna ukubonakalisa ukuba iphondo iMpuma Koloni linakho ukunikeza ezinye zezi nkonzo zeengcali apho ephondweni ukuze abantu bazuze kuzo.
Malungu Abekekileyo, iNelson Academic Hospital yonyule abatyandi ababbini abenza utyando ebantwaneni abanenkalakahla eyahlukeneyo bazise uncumo kubantwana ababengasoze bakwazi ukubanethuba lokuncuma ngokuzidla. Aba batyandi bakwasebenza nequmrhu likazwelonke elingelilo elikarhulumente ukunaniselana ngesakhono sokuvuselela ubudoda, yaye ekupheleni konyaka u-2020/21, isebe lizakube linakho ukunikeza iinkonzo zokuvuselela ubudoda zinikezwa emakhayeni wabantu, nto leyo eyakubuyisela isidima samadoda aselula abengamaxhoba olwaluko oluphanzileyo.
Ngakwicala labasebenzi, isebe liye laqhuba inkqubo yokuphendla izikhundla zalo ukuqinisekisa ukuba ukuba nefuthe nokuhambelana kwazo kunye neqhinga necebo lokuhanjiswa kweenkonzo. Ezi zikhundla kwavunyelwana ngazo ngeyoKwindla ngo-2018, kodwa noxa kunjalo, ukuqinisekisa ukuba isebe linezikhundla zengqesho ezihambelana nenjongo yalo nezihambelana namanqanabo amakhulu namancinci ukuphumeza iinjongo Zolawulo Lwesithandathu, isebe liqhuba iingxoxo ezinzulu nabathathi-nxaxheba abaphambili.
Kunyaka u-2019/20 ukuza kuthi ga ngoku, isebe likwazile ukuqesha abongikazi abangamakhulu amahlanu anamashumi amabini anesithathu (523) ekuquka kubo abanogikazi abongoompondozihlanjiwe nabo babhalisiweyo. Ngokuphathelele kubaNcedisi Jikelele, isebe likwazile ukuqesha Abancedisi Jikelele abalikhulu elinamashumi amabini anesibini (122) kwabo bangamakhulu amathathu (300) ebekulindeleke ukuba baqeshwe ngenxa yoxinzelelo olumandla kwingxowa yesebe ethe isebe yagaxeleka kulo ukususela kwiinyanga ezisithoba zokuqala zika-2019/20 zaze iintshekela zaphumela kunyaka-mali olandelayo.
Iinzame zethu zokuphucula ixesha abancedakala ngalo abantu nemeko yohambo lwezigulana xa bekumaziko wethu, siye safaka izithuthi ezingamakhulu amabini anamashumi amathandathu anesithoba zeenkonzo zongxamiseko (269) saze saphucula imiqathango yokhuseleko ngokufakela izixhobo zokulondla apho ezi zithuthi zihamba khona nezixhobo zokunxibelelana. Emva okuphawula ukungoneliseki kwiindawo zezithuthi zeenkonzo zongxamiseko, kwasingathwa Ingqungquthela yePhondo yeeNkonzo Zongxamiseko ekupheleni kweyoMdumba ukwenza isithebe sothetha thethwano nesokuyilwa kwecebo eliqiqileyo.
IKholeji yeMpuma Koloni yeNkathelelo yoNgxamiseko inexanduva lokuqinisekisa ukuba abasebenzi beenkonzo zongxamiseko baqeqeshwe ngokwaneleyo ukuqinisekisa unikezo lweenkonzo oluzizo kubantu baseMpuma Koloni. Imali yale Kholeji ixhomekeka yaye inikezwa ngokwezidingo zokuqeqesha ezifunyenwe kwinkqubo yeenkonzo zongxamiseleko ngendlela ehambelana neenjongo ezicetywa ukuphunyezwa ezibekwe lisebe.
Undoqo weKholeji yeeNkonzo zoNgxamiseko kukuphumeza iinkqubo zemfundo ezihambelana neNQF ezihambelana nomgaqo-nkqubo weMfundo yeNkathalelo yoNgxamiseko kaZwelonke noQeqesho (NECET). Kuyinjongo yekholeji ukufundisa isifundo esisigxina sonyaka (1) seHigher Certificate kwiNkathelelo eNgxamisekileyo yoNyango (HCert: EMC), iDiploma yeminyaka embini (2) esisigxina kwiNkathalelo yoNgxamiseko (Dip: EMC) kunye nonyaka omnye (1) osisigxina kwiAdvanced Certificate kuHlangulo (AdvCert: Medical Rescue).
Noxa kunjalo, ukuphumezwa kwamsinya kwezi nkqubo kubne ngumngeni onzima kunoko bekulindelekile njengoko umgaqo-nkubo kuzwelonke usithi ezi nkqubo zingafundiswa kuphela ngamaziko emfundo aphakamileyo. Ngokuphathelele kulo mba, isebe ligqibezela izivumelwano ezi nkqubo lokufundisa ezi nkqubo ngokubambisana neNelson Mandela University.
Uzinzo kunye nobume beLilitha College of Nursing bekuzezinye zoondowo besebe nomthathi-nxaxheba kwindibano entsuku-mbini eyayisingathwe ngeyeSilimela yayila isithebe sobudlelwane ebesidingeka ngokumandla phakathi kwekholeji nabathathi-nxaxheba. Ngokuphathelele kwinkqubo yezemfundo yeKholeji, ekupheleni kweyoMnga ngo-2019, ukubhaliselwa kweenkqubo zokuqeqesha abongikazi ababizwa iilegacy nurses zavalwa ukunika umtyhi kwizifundo ezihambelana neNQF nekwanikezwa kumaziko aphakamileyo emfundo nokuqatshelwa ngokusesikweni phantsi kweemeko ezithile kweHigher Certificate neDiploms kwizifundo zobongikazi.
Malungu Abekekileyo, ukuphendula kwethu kwizidingo zongxamiseko zoluntu lwethu kudinga ukuqoqosheka nokuthathelwa uxanduva. Ndiyazingca ukuchaza ukuba iCall Centre yeSebe lezeMpilo eMpuma Koloni linconywa njengowona mzi wokuphendula iminxeba obalaseleyo kweli lizwe. ICall Centre yethu ufunyaniswe ukuba ngoyena uqhuba kakuhle ekuqubiseni neempendulo kwimibuzo yabemi nokulandelela ekusombululeni izikhalazo ezikumila kunjalo kwangethuba, kwangxesha nye ikwaququzelela ulawulo lobuvela tanci nolwazi.
ICall Centre yesebe ngoku ithathe nexanduva lokulawula iminxeba yohoyo esuka kumaziko ezempilo, uxanduva obelifudula lisenziwa ngabantu abaqeshiweyo bangaphandle kwesebe. Ubhubhane weCovid-19 ukhokelele kumzi wethu wokuphendula iminxeba ukuba uphendule imibuzo esuka kuwo onke amasebe nakwamanye amaphondo. Oku kuqinisekisa ngakumbi ukuphendula kwecandelo lethu kwamsinya yaye siyazingca ngala majoni akhokeleyo.
IMINGENI KUHAMBISO LWEENKONZO
Noxa sinezinto esiphumelele kuzo, sisajamelene nemingeni emininzi. Ihlabathi liphela lijongene nokuthi thu kwentsholongwane icorona ebulalayo. Iimpawu zibonisa ukuba oku kuzakuba ngumthwalo kwizixhobo zethu ezisele zinciphile kakade. Ukuhambelana nemiqathango yeNtlekele yeCovid, iintshukumo zesebe neziseko ziye zafaka phantsi kweziseko zentlekele.
Mam’ uSomlomo, siluvile ubizo leNkulubaphathiswa yethu yokunciphisa umthwalo wesi sigulo nokuqinisekisa ukuba sandisa iminyaka abantu bephondo abaye bayiphile. Sizakuyenza imiyalelo yaye sithobele ekuqhubekeni siphucule umgangatho weenkonzo zeNkathalelo yezeMpilo yokuQala nokuphumeza injongo eyayibekiwe yokuba umyinge ongama-80% weekliniki zethu kumele ufikelele kwizinga eligqibeleleyo ngo-2024.
IZINTO EZINGUNDOQO KU-2020/21:
Somlomo Obekekileyo, izinto ezingundoqo kwisebe lezeMpilo ngexesha leMTEF zihambelana neziphumo ezilishumi zeCebo Eliqiqileyo lango 2020-2025kwacebo elo elixhotyiswe licebo lecandelo lezeMpilo lango-2019 – 2024, Presidential Summit Comapct, Ingqungquthela yethu yePhondo, Intetho yeSizwe kaMongameli, kunye neNtetho yePhondo yeNkulubaphathiswa. Ezi zinto zingundoqo zijolise ekugqamiseni ukuzinikela kwethu negalelo lethu kubomi obude, obusempilweni nobusemgangathweni kubantu baseMpuma Koloni. Ekuqinisekiseni ukuba iinkonzo zempilo zinikezwa ngaphandle kophazamiseko, Iqela Labalawuli Abayintloko (EMT) linikwe ixanduva lokuqinisekisa ukuqhubeka kwemicimbi yesebe.
Kulo nyaka-mali, sizakube sizakube siphumeza izikhundla zethu zengqesho sithathela ingqalelo ukufikelela kwazo nokuqhubeka kwesebe ngaphandle kwezikhwa zilima. Kungoko, ukugcwaliswa kwezithuba zengqesho ukususela ngomhla woku-01 kuTshazimpuzi 2020 kuzakuhambelana kunye nezikhundla zengqesho ezipasisiweyo yaye kuzakulawula sisicwangciso sokusiwa kwabasebenzi kwizikhundla ngezikhundla.
Iinkqubo zokuqeshwa nokugcwaliswa kwezikhundla zengqesha kuzakugxila koondoqo abaphawuliweyo besebe nabaquka ukubakho kobunkokheli kumaziko ezempilo nokubakho kweengcali zonyango nabongikazi speciality kumaziko ezempilo asemaphandleni.
Ngokuphathelele kubonkokheli kumaziko ezempilo, ngexesha le 2020 MTEF, isebe lijolise ekugcwaliseni izikhundla zengqesho ezilikhulu elineshumi elinesithathu (113) zabaLawuli boMsebenzi (PHC) nekuzakukhkeliswa ulwabiwo lweekliniki. Isebe lizakukhokelisa ukugcwalisa izikhewu ezikhoyo kuquka Iingqonyela kwizibhedlele iFrere, eSt Elizabeth, eKomani naseTower.
Malungu Abekekileyo, ungenelelo lwethu luzakugxila kwimeko Yolwazi Nonxibelelwano Lobuchwepheshe (ICT) egqibeleleyo nenolwamvila nezakuphembelela ukufikelela ngethuba kulwazi oluthembekileyo ukuncedisa kuthatho lwezigqibo ngokukhawuleza nangendlela ephucukileyo njengoko lilawula iCebo leICT.
Iinkonzo zempilo zeeNqila
Somlomo Obekekileyo, siye sathatha inxaxheba ngokupheleleyo kwiingxoxo zasesidlangalaleni zeNHI zePalamente kaZwelonke nezazisindlekwe ngeyeNkanga ngo-2019. Ndichulumancile ukwazisa ukuba uluntu lethu lubonakalisa imincili kwezi ngxoxo. Malungu Abekekileyo, iingxoxo zethu noluntu zibonakalise ukuba sifuna ukuphumeze inkonzo yezempilo efanayo kubo bonke abantu bethu senze Inhi ibeliphupha elifezekileyo ngelixesha sidla amazimba, kufuneka siyile iqhinga elineenkalo ezininzi elizakuzisa iinkonzo zempilo kwiphondo elikhulu njengeli lethu elinamaxethuka ohlukeneyo nekunzima ukuhamba kuwo ngamanye amaxesha.
Ukuphumezwa okusekumbhovu kweNHI, njenge Sebe lezeMpilo, kufuneka silungise amaziko wethu ezempilo ukuba aqatshelwe ngokusempilweni njengamaziko anikeza iinkonzo zempilo kusetyenziswa amazinga eeKliniki Ezigqibeleleyo neziBhedlele ezigqibeleleyo. Kweli cala, sijolise ukuba izibhedlele zethu zeengingqi nezinikeza iinkonzo zeengcali zibekanti zonke zikulungele ngokugqibeleleyo yaye umyinge wama-30% wezibhdlele zethu zeenqila ziphumelele zaze zagcina izinga lazo leziBhedlele Ezigqibeleleyo ngo-2020/21. Kwizinga lenkathelelo yezempilo lokuqala, sijolise ekubeni iikliniki ezilikhulu elinamashumi amathathu (130) neeCHC ezilishumi elinesibhozo (18) ukuba zifumane kananjalo zigicine izinga lazo leeKliniki Ezigqibeleleyo neeCHC Ezigqibeleleyo, ngokulandelelana ngexesha elinye.
Kumlo wethu wokuphucula impilo yamanina abelekayo nabantwana, isebe lizakubambisana namacandelo karhulumente afana neSebe loPhuhliso Loluntu neeNkqubo Ezikhethekileyo, SASSA, iSebe lezemicimbi yekhaya, iSebe lezoPhulhiso lamaPhandle noHlengahlengiso lwemiHlaba, Isebe lemfundo, neSAPS kunye namaqumrhu oluntu afana neenkokheli zemveli, abanyangi bemveli, iinkokheli zeenkolo, Imbumba Yamakhosikazi Yakomkhulu, amaqumrhu angengokarhulumente kunye nooceba ukugxila kakhulu kwimimandla eyongamelwe kukungondleki kunye nokukhulelwa kwamantombazana aselula.
IiDCST zethu ziqeqesha oogqirha kwizibhedlele zeenqila kwiEmergency Triage Assessment and Treatment, Ukuncedisa Iintsana Ziphefumle, Nokungondleki Okumandla njengendlela zokungenelela ukuthintela ukubhubha nokudodobala kweentsana ezandula ukuzalwa nabantwana abaneminyaka engaphantsi kwemihlanu. Kaloku mawethu indaba yempilo yoomama nabantwana luxanduva lwethu sonke ukuba sifuna ukubona uMzantsi Afrika oqaqambileyo ngomso.
Indlela yethu esingise Kunikezo lweeNkonzo yezeMpilo Efanayo kumntu wonke kubandakanya ukuqinisekisa ukufikelela kwinkathalelo esemgangathweni ekufuphi nabantu. Sizakulumana indlebe noluntu nabathathi-nxaxheba ngezicwangciso zethu ukulungiselela amaziko ezempilo neenkonzo eziqinisekisa “Batho Pele nokuba Kumele kulawule abantu”.
Ngapha koko, Malungu Abekileyo, sizakuthenga izigadla ezinkulu ezitsala iikliniki ezihambayo ukuba zinikeze iinkonzo kweminye imimandla eneenkonzo ezinqongopheleyo zephondo lethu. Ukongeza kwezi kliniki, ukunikeza iinkonzo njenge nxalenye yonikezo lweenkonzo lwaveki zonke kwimimandla ephawuliweyo, zizakubalulutho kumaphulo okufikelela eluntwini njengoko zizakube zinamagumbi okuxilongela, izixhobo zokunyanga, amagumbi angasese, yaye zikwazi ukusetyenziswa nangabantu abaphila nokukhubazeka. Sinenjongo yokwanda sisuka kula magumbi okuxilongela atsalwa zizithuthi sisingise kumaziko ezempilo atsalwa zizithuthi.
Sizakuqinisekisa ukuba siqesha abaqhubi abafanelekileyo abaneempepha zokuqhuba ezifanelekileyo ukuba bangakwazi ukuqhuba ezi zigadla yaye base ezi nkonzo zidingeka ngokumandla ebantwini bethu. Somlomo, Obekekileyo, abantu bethu badiniwe ngoku kukumamela sithetha, bafuna ukubona sisenza qha qwaba!
Iinkonzo Zonyango Ezingxamisekileyo
Ngokuphathelele kule nkqubo, Somlomo Obekekileyo, sizakube silinga okokuqala ukusetyenziswa kwezithuthuthu ukuzisa iinkonzo kwezinye zeendawo ezikude nezisemaphandleni zephondo lethu. Kunyaka u-2020/21, sizakuthenga izithuthuthu ezilikhulu (100) nezizakulungiselelwa ukuba zibezizithuthi zeeNkonzo Zonyango Ezingxamisekileyo, iikiliniki ezihambayo, yaye zisetyenziswe njengezixhobo zokuthutha amachiza ziwasa kwiindawo amachiza alandwa kuzo zizigulane phantsi kwenkqubo yeCCMDD.
Kwingqungquthela yeEMS ebendiyibizile siye savumelana ukuba sizakukhokelisa ukusombulula ezi zinto zilandelayo: i) Ukuthi gqolo kokubakho kweeNkqubo zeMpilo zabasebenzi, ii) ukuqinisekisa ukuba bonke abasebenzi bethu beEMS banalo izinga lemfundo elidingekayo kuquka abaqhubi, yaye iii) ukuqinisekisa ukubuya kwangethuba kwezithuthi eziyo kulungiswa.
Iingcebiso zikaNamndiyakrokra wezeMpilo nokonyulwa kweGosa lezeMpilo zeNgqondo kwenze isiseko esiluqilima kumsebenzi owenziwayo lisebe ukuphucula ukufikelela kwiinkonzo zempilo zengqondo ephondweni.
Senze Icebo Eliqiqileyo lePhondo lezeMpilo zeNgqondo elingekapasiswa ngokusesikweni elisekelwe kwicebo lokusasaza ukufikelela kwinkathalelo yezempilo yaye sizakuxoxa ngeli cebo nabathathi-nxaxheba abachaphazelekayo kwiKwingqungqutheka yezeMpilo zeNgqondo nendizakuyisingatha phambi kokuphela kweenyanga ezintandathu zokuqala zika-2020/21.
Sikwakwiphulo lokuphumeza iBhodi Yohlengahlengiso lezeMpilo zeNgqondo ezakujongana neenqila iAmathole neBuffalo City. Ezi bhodi zohlengahlengiso zibalulekile ekuqinisekiseni ekuphumezweni nokuthotyelwa koMgaqo-nkqubo wezeMpilo zeNgqondo.
Injongo yethu kuqalisa izigulane kunyango ezingamawaka angamakhulu amane anamashumi asibhozo anesihlanu anamakhulu asithoba anamashumi asibhozo anesixhenxe (485 987) namawaka angamashumi amane anesithoba anamakhulu asibhozo anamashumi asithoba anambini (49 892) yaye kulawulwe noxinzelelo oluphezulu legazi neswekile ngokulandelelanayo. Sikwajolise ekuphumezeni umyinge wama-25% wokuhlolwa kokupohazamiseka ngokwasengqondweni notyando lokugutyulwa korhatyazo elikwizinga labantu abaliwaka elinamakhulu amathathu (1 300) kwisigidi ngasinye sabantu.
Malungu Abekekileyo, kumlomo wethu ochasene nogawulayo nentsholongwane yakhe, sizakwandisa ngokukhawuleza ungenelelo lethu olujolise ekufikeleleni kwinjongo kazwelonke yeqhinga lika-90-90-90 ekupheleni kweyoMnga ngo-2020. Isebe lizakuqhubeka likhupha iikhondom zamadoda nezamanina njengeqhinga lokuthintela intsholongwane kagawulayo, izifo ezosulela ngokwabelana ngesondo (STD) nokukhulelwa okungacetywanga. Siceba ukukhupha iikhondom zamadoda ezizigidi ezingama-93.3 neekhondom zamanina ezizigidi ezi-4.8 ngonyaka u-2020/21. Sisebenzisa iCondom Use Drive yethu, sijolise ekugxileni ekuphakamiseleni phezulu ukusetyenziswa kweekhondom zamanina kwiphondo lonke nokunika amanina amandla okuzikhusela kwizigulo ezosulela ngokwabelana ngesondo nokukhulelwa okungacetywanga.
Sizakugxila ikakhulu kubafundi njengoko belelona qela labantu elisekungciphekeni yaye siseke ubudlelwane namaziko aphakamileyo emfundo ukuze abafundi bafikelele kwiinkonzo zentsholongwane kagawulayo nakwisifo sephepha kuquka ukwenza iikhondom zifumaneke, izixhobo zokuvavanya intsholongwane kagawulayo nesifo sephepha kunye nokufikelela kwiiARV kumaziko wabo emfundo aphakamileyo.
Somlomo Obekekileyo, siceba ukuqalisa kunyango izigulane ezintsha zentsholongwane kagawulayo ezingamawaka alishumi elinesixhenxe elinamakhulu amabini anamshumi amabini anesibini (70 222) yaye ezingamawaka angamakhulu amathandathu anamashumi asithoba anesithandathu anekhulu elinamashumi asithoba anesixhenxe (696 197) ziqhubeke neART. KweyoMnga ngo-2019, ISebe lezeMpilo kuZwelonke lazise ichiza elitsha elijoliswe ukuba lisetyenziswe njengelinye leyeza lokuqala elinokungena endaweni yamachiza akhoyo eFDC.
Sizakwaqhuba iinkonzo zokuvavanya intsholongwane kagawulayo kwizigulane ezisi-1.7 lesigidi size sinyuse nenani labantu abavavanyayo liyakuma kumyinge wesi-7%. Oku kuzakubayimpumelelo ngentsebenziswano neBhunga likaGawulayo eMpuma Koloni (ECAC) nabanye abathathi-nxaxheba ukuqinisa ukuvavanya kwabantu besemakhaya ingakumbi kwiqela labantu elisengciphekweni losuleleko.
Amaqhinga wethu ngokuphathelele kulo mcimbi azakuquka iIndex Testing ukukhangela abantu abakhe badibana nabantu abaphila nentsholongwane kagawulayo neHIV Self Screening nokufakwa kwezixhobo zokuvavanyela intsholongwane kagawualyo ekhaya njenge nxalenye Primary Health Care Re-engineering Outreach Teams. Sizakuthenga neengxowa eziqulathe izixhobo zokuvavanya le ntsholongwane zithengelwa amaziko wethu eNkathalelo yezeMpilo yoLuntu ukuba nawo aqhube uvavanyo lwentsholongwane kagawulayo njenge nxalenye yeentshukumo zazo zokufikelela eluntwini.
Sikwajolise ukwandisa iindlela zokuthintela usuleleko lwentsholongwane kagawulayo isuka kunina isiya emntwaneni ngokunciphisa iPCR kubantwana abasekungciphekeni kosuleleko yintsholongwane kagawualyo ngomyinge ongaphantsi ko-0.5%. Ukuphumeza le njongo, kufuneka siqinisekise ukuba umyinge wama-95% ubuncinane wamanina akhulelweyo aphila nentsholongwane kagawulayo aqaliswa kunyango lweARV ngendlela ehambelana nenkqubo yokuqaliselwa unyango yempilo kaMama, Umntwana Namanina.
Kumlo wethu ochasene nesifo sephepha, sibeke bucala izigidi ezingamashumi asixhenxe anesithoba zeerandi sizibekele izixhobo zovavanyo zeGeneXpert kunye namawaka angamakhulu asithoba anamshumi amane anesithandathu anamakhulu amahlanu anamashumi amathandathu eerandi (R 946 560) ebekelwe uvavanyo iUrine Lam. Ezi ntlobo zovavanyo zincedisa ekubhaqeni kwangethuba isifo sephepha kubantu jikelele nakwizigulane eziphila nentsholongwane kagwulayo nezizezona zisebungciphekweni bokufumana isifo sephepha.
Silandela inkqubo Jikelele kaZwelonke Yococeko lokuhlanjwa Kwezandla neyayiqalwe yiFrontier Hospital nezakuqhutywa kwiphondo lonke kwiinyanga ezine zokuqala zika-2020/21. Oku kwenziwa ikakhulu ukulwa ukwanda kwentsholongwane iKhorona. Sizakunyusa iziznga lokufikelela kwiinkonzo zokufunxwa kwamanzi kwizintso ngokongeza iindawo ezisibhozo zokufunxwa kwamanzi kwizintso eCecilia Makiwane Hospital nezizakukhathalela izigulane zengingqi isibhedlele eso sikuyo neenqila ezikude ezifana neChris Hani neJoe Gqabi.
Ukwakhela phezu kwesibophelelo esenziwe yiNkulumbuso Ebekekileyo okunikeza ngezigidi ezingamashumi amabini anesihlanu zeerandi zomatshini weRadiotherapy eNelson Mandela Academic Hopsital, isebe ngokusebenzisana neSebe lezeMpilo kuZwelonke, liqalisa ukwakhiwa kwesakhiwo esinguvimba wokunyanga umhlaza apho kuzakugcinwa khona lo matshini. Eli phulo lizakugqitywa ngexesha le MTEF yaye ngaphandle kwamathandabuza lizakuyiphucula imeko emaxongo yezigulane zethu eziphila nomhlaza ezikwimpuma yephondo.
Ukususela ngoTshazimpuzi ngo-2020, iNelson Mandela Academic Hospital izakuphumeza inkqubo yokunyanga umhlaza ichemotherapy enwenwela eSt Elizabeth Hospital eLusikisiki, eSt Patrick’s Hospital eBizana, eMadzikane kaZulu eMount Frere naseSt Barnabas Hospital eLibode njenge nxalenye yokufikelela kubantu abakufuphi nakwabo bakude. Izigulane ezinomhlaza zezi ngingqi akuzokudingeka ukuba ziye eMthatha ukuze zifumane ezi nkonzo.
Kwiinyanga ezintathu zokuqala zika-2020/21, iziko lotyando lwendlebe lizakuvulwa eNelson Mandela Academic Hospital.
Umsebenzi ophathekayo weziko lotyando lwendlebe ePE Provincial Hospital sekumbovu ukuba uphethwe yaye le nkonzo izakuqhubeka ukufumaneka ebutsheni beenyanga ezintathu zokuqala zika-2020/21. Sithenge umatshini wale mihla wodidi eliphezulu lobuxhakaxhaka bobuchwepheshe obonisa ngcono imithanjana yegazi namagumbi entliziyo ukuncedisa ukuphawula ngendlela engcono izigulo.
Isebe liyaqhubeka nokuqhuba ezinye zezona nkqubo zenkxaso-mali zinkulu zokuqeqeshwa kwabantu kwicandelo lezenzululwazi yezempilo ukulungiselela ukudingwa kweenkonzo zeli candela ephondweni nakwilizwe ngokubanzi. Kunyaka u-2020/21, sizakube sixhasa abafundi abangamakhulu asixhenxe namashumi amabini anesixhenxe (727) abazakube befunda izifundo ezahlukeneyo zeNzululwazi yezeMpilo izifundo zempilo ezincedisa kwezonyango. Kwaba bafundi, abangamakhulu amabini anesibhozo (208) bayinxalenye yeNelson Mandela – Fidel Castro Program, ngeli xa abangamakhulu amahlanu aneshumi elinesithoba (519) bakwiiyunivesithi zase Mzantsi Afrika.
Abafundi abalikhulu elinamashumi amane anesixhenxe (147) basandula ukunikwa inkxaso-mali yokufunda yenkxaso-mali ekwisithuba sezigidi ezingamashumi amabini zeerandi njengo ngenelelo olusuka ngqo kulawulo lwesithandathu njengoko lo mlisela nomthinjana ubujongene nokuchwethelwa bucala ezifundeni ngenxa yokungabinayo imali babe bengenokwazi ukuqhubekeka nokufundela amacandelo engqesho amaphupha wabo. Kubafundi abangamakhulu amabini anesibhozo (208) baseMpuma Koloni abakwinkqubo yaseCuba, abangamashumi asibhozo anesibini (82) bafunda unyaka wabo wokugqibela woqeqesho kwizikolo ezahlukeneyo zonyango eMzantsi Afrika baze abangamashumi asithoba anesibini (92) bazakubuyela eMzantsi Afrika ngeyeKhala ngo-2020 uzokwenza uqeqesho lokugqibela lonyango.
Kungahambelanayo nenjongo yethu eqiqileyo yesithoba, (Ukuphuculwa kobunkokheli nolawulo kwicandelo lezempilo ukuphucula umgangatho wenkathalelo), kungentsuku zatywala isebe lizakusungula Iziko lemfundo loLawulo nobuNkokheli iDr Stamper ezakube iseCecilia Makiwane, nekunqwenelwa ukuba isetyenziswe njengeziko lokuqeqeshwa kwakhona kwabasebeni bezempilo ngokuthi kuhlwayelwe imbewu yokuxatyiswa kwezempilo njengoko kuphemisewle kwiSicwangciso soPhuhliso sikaZwelonke, Umthetho wezeMpilo kaZwelonke noMgaqo-siseko.
Somlomo Obekekielyo, njengoko besele ndikhankanyile ngaphambili ubambiswano lesebe lam neSebe Lemisebenzi Yoluntu, inkqubo yethu yeziseko zphuhliso ihlabela mgama. Siqinisekise ukuba sihlaziya amaziko wethu ezempilo nekudalwa kubangwa ukuba ayadilika. Kodwa noxa kunjalo, ungenelelo lwethu ngenxa yentlekele akuthetheleli uxanduva lethu lokujonga eminye imisebenzi.
Asizokwazi ukufezekisa iinjongo zethu kwiinyanga ezintathu zokuqala zalo nyaka-mali njengoko besigxile ekuhoyeni ubhubane. Injongo yethu kukuyila iqhinga nokuqala iinkqubo ezizakuqhuba ixesha elide. Ngoku sikwenzile oko, ndingayibhengeza ngokukhululekileyo nangokuzithemba inkqubo yethu yeziseko zophuhliso.
Iziseko zophuhliso ezidilikayo kumaziko wethu ezempilo ziqhubeka nokubayindaba yakwamkhozi. Ndithathe isigqibo sokugxila iinzame zethu ekuphuculweni kweziseko zophuhliso namaphulo emali. Ndichulumancile ukwazisa ukuba la amaphulo azakuba ngundoqo ngexesha leMedium Term Expenditure Framework:
- Ukwakha amacandelo adilikileyo aseLady Grey Hospital; izidi ezingmashumi amane zeerandi zibekelwe bucala ukwenza oku;
- Ukwakha ikliniki entsha eCebe
- Ukwakha ikliniki ekwizinga leCHC kwaNU 14 eMdantsane, eRobby Delange naseUnit P
- Kuzakwenziwa uhlaziyo olumandla lweekliniki iPhilani neLinge kwiNqila iChris Hani
- Kukhokeliswe ukwakhiwa kweekliniki eXhorha Mouth naseRhabula
- Kuhlaziywe yaye kwandiswe iikliniki iKwazakhele, iMotherwell, neNew Brighton
- IKomani Hospital izakubiyelwa yaye kuqinisekiswe ukuba oomatshini bakhona bokuhlamba impahla basoloko besebenza. Kuzakugqityezelwa umsebenzi kumagumbi ezigulane ebele ephawulelwe ukuba azakuhlaziywa.
- Sizakuhlaziya ilkiniki yaseTsolo.
- Sizakwakha sihlaziye ikhitshi negumbi lokuhlamba iimpahla eAll Saints Hospital
- Kuzakwakhiwa izibhedlele ezisemabaleni kuzo zonke iinqila (8)
Somlomo Obekekileyo, iikliniki zodaka zizakubayinto yamhlamnene kwiNqila iChris Hani. Sizakwakha kwakhona iiklini zoluntu kwimimandla eneekliniki zodaka. Ndizakugqibezela ukuqalisa kokusebenza kwesivumelwano sentsebenziswano phakathi kwesebe lam neSebe Lemisebenzi Yoluntu ukugxila kulungiso olungephi nolondolozo. Kweli vela-tanci, iSebe lezeMpilo lizakusebenza nabachweli bakwiSebe Lemisebenzi Yoluntu kwiingqingqi ukuba balungise baze balondoloze. Sizakuncediswa ngabachweli beNkqubo Eyandisiweyo Yemisebenzi Yoluntu.
Sizakwathethathethana neenkokheli kumasipala iMbizana ukuqukumbelana isivumelwano sokukhutshelwa kwekliniki iNokhatshile kwisebe ngenjongo yokusebenzisa eli ziko ukuba lizise iinkonzo kuluntu oluchaphazelekayo laseMbizana.
Malungu Abekekileyo, intlekele kazwelonke yamatyala asusela kukreqo kwezonyango iyaqhubeka nokutheza imali yethu neenkqubo zethu zocwangciso yaye ngoyena nobangela mkhulu wemali ezalayo nokungathobeli amaxesha okuhlawula abaniki zinkonzo kwisithuba ezintsuku ezingamashumi amathathu (30) ezibekiweyo.
Ungenelelo leNkulubaphathiswa Ebekekileyo lokuphakamisela phezulu umngeni wamatyala asusela kukreqo kwezonyango ukuba ubengumba ophambili kwiphondo hayi nje umba wezempilo, luthakazelelwa kakhulu. Amaqela weOfisi yeNkulubaphathiswa, ezeMpilo noNondyebo wePhondo aza namagalelo wawo ohlukeneyo ukulwa nkalo zonke esi sibetho.
Elethu igalelo, siyekile ukuyalela Amagqethwa Ombuso eMthatha yaye onke amatyala ebefudula ehoywe kule ofisi anikezelwe kwiNorton Rose Fulbright SA ukuba akhuselwe phantsi kwesivumelwano sikaZwelonke seRT kude kube kanti icandelo lamatyala asusela kukreqo kwezonyango liyasekwa kwiOfisi yeNkulubaphathiswa. Isebe likwathatha inxaxheba kwizivumelwano zikaZwelonke zeRT zenkxaso kumaphondo zenkonzo zophando-nzulu nokulawulwa kwatyala asusela kukreqo kwezonyango.
Sizakube sikwaxhobisa necandelo lethu leenkonzo zomthetho kundlu nkulu ukuze likwazi ukuqubisana nenkungula zemisila yengwe nezicelo zePAIA ngeli xa kuqiniswa iinkqubo kwizibhedlele ezimangalelwe kakhulu ukuskena nokugcina zikhuselekile iinkcukacha zezigulane.
Isebe likwakwinyathelo lokuyila isigcwangciso seshishini sokufakwa kwezixhobo zokusebenza kwamaziko asibhozo eCerebral Palsy (CP) kwiphondo lonke nezinokuthi xa zinezixhobo zokusebenza ezipheleleyo zingasetyenziswa lisebe ukubonisa iinkundla zamatyala ukuba Umbuso unawo amandla ngokwaneleyo okukhathalela iiCP yaye ngenxa yoko unciphise amaxabiso axhomileyo onysngo exesha elizayo nathi afunwe ngamagqwetha kwisebe.
IMALI NOLWABIWO LWAYO NGOKWEENKQUBO 2020/21
Malungu Abekekileyo ale Ndlu, ulwabiwo lwethu lwemali alusokuze luyanele imingeni esijongene nayo. Imali yonyaka-mali u-2020/21 ziibhiliyoni ezingamashumi amabini anesithandathu, nezigidi ezingamakhulu amathathu anamashumi asithoba, namawaka angamakhulu amahlanu anamshumi asixhenxe anesihlanu zeerandi. Le mali yeyokuphumeza ezi zinto zibalulekileyo zingentla. Le tafile ingezantsi icakaca imali ngenkqubo nganye nesintlu soqoqosho:
Ulwabiwo R ‘ 000
2. Iinkonzo zeMpilo zeeNqila
13 676 205
3. Iinkonzo zoNyango eziNgxamisekileyo
4. Iinkonzo zeziBhedlele zePhondo
3 557 063
5. Iinkonzo zeziBhedlele eziseMbindini
4 618 025
6. EzeMpilo zeNzululwazi noQeqesho
7. Iinkonzo eziNcedisayo kwiNkathalelo yezeMpilo
8. Ulawulo lweeNkonzo zamaziko ezeMpilo
26 390 578
Izinto ezithengwayo neenkonzo
6 220 223
Ukufudukela kwabasebenzi kwezinye iindawo nenkxaso-mali
1 586 809
Somlomo Obekekileyo, le mali izakuxhasa ezi zinto zingundoqo kwinkqubo nganye:
Imali yolawulo izakuqhubela phambili ungenelelo lweICT ezizakuqinisekisa unxibelelwano lawo onke amaziko ezempilo nokufumaneka kolawulo oluchanekileyo lolwazi nolungekho semva kwexesha; ukuqaliswa kweNkqubo yoBhaliso lwezeMpilo lweziGulane (HPRS) kulungiselelwa iNHI; Uqokelelo lemali oluphuhlileyo, nokuqaliswa kwezikhundla zengqesho ezintsha.
Imali yeeNkonzo zeMpilo zeeNqila njengeyona nkqubo inkulu nebalulekileyo, izakuqhuba ukuphunyezwa kweeNational Core Standards kuwo onke amaziko ezempilo; amavela-tanci eekliniki Ezigqibeleleyo; ukufaka iintsontela kwiinkonzo zokufikelela eluntwini; nokunyusa ukufikelela kwiinkonzo zempilo kwezona ndawo zisemaphandleni nezikude zephondo.
Imali yeeNkonzo zoNyango eziNgxamisekileyo kuzakuqinisekisa ukunikezwa kweenkonzo ezingxamisekileyo, uthutho lezigulane nokuthuthwa kwezigulane phakathi kwezibhedlele kulandelwa imiqathango eyiyo, yaye zixhsswa ziseko zophuhliso zeICT ezomeleleyo nezizakuqhubela phambili ukusetyenziswa okukuko nokunelwamvila kwezithuthe zeEMS nabasebenzi beli candelo. Le mali izakwakusetyenziswa ukuthenga izixhobo ezizakukhusela izithuthi zezigulane nabasebenzi xa besemsebenzini.
Imali yeeNkonzo yeziBhedlele zePhondo izakuophucula ukufikelela kwabantu kwiinkonzo zeengcali jikelele kwizibhedlele zeengingqi ziqinisekise ukuhambiselana kwazo nomgangatho wesiBhedlele esiGqibeleleyo.
Imali yeeNkonzo zeziBhedlele eziseMbindini izakuqinisekisa ukufikelela okungcono kwabantu kwiinkonzo zeengcali kwiphondo lonke, kubekho ugxininiso olumandla kwizigulane zomhlaza kwingingqi eseMpuma yephondo. Imali izakukwafikelela kwinkqubo yokufikelela kubantu abakude nabakufuphi ukuphucula umgangatho wenkathalelo.
Imali yezeMpilo zeNzululwazi noQeqesho izakuqhubeka nokunika inkxaso kwaba bafundi bangamakhulu asixhenxe anamashumi amabini anesixhenxe (727) abakwinkqubo yenkxaso-mali yesebe; ukuqhubela phambili iinkqubo ezilungisiweyo kusetyenziswa iLilitha Nurse College neEMS College ngendlela ethobela imithetho Isebe leMfundo Ephakamileyo noQeqesho kunye nokuseka ungqa-phambili weziko lemfundo loLawulo nobuNkokheli iDr Stamper.
Imali yeeNkonzo eziNcedisayo kwiNkathalelo yezeMpilo izakuqinisekisa ukugqitywa, ukuhlawulelwa nokuqatshelwa ngokusesikweni kwemvaba yamachiza yaseMthatha; unikezo lwamayeza olungaphazamisekiyo; kuquka ukufikelela kwiinkonzo zokufakwa kwamalungu omzimba angengawo awokwenene okanye izixhobo zokuxhasa amathambo omzimba.
Imali ebekelwe ulawulo lweeNkonzo zamaziko ezeMpilo izakugxila kulondolozo lwamaziko ezempilo kusetyenziswa iqhinga lokunabisa ezi nkonzo ngobambiswano neSebe Lezemisebenzi Yoluntu; ukunikeza izixhobo zonyango zokuzalwa kwabantwana nezempilo yabo; nokuxhasa amaziko ezempilo abeneziseko zophuhliso ezifikelele kwizinga leeKliniki neziBhedlele Ezigqibeleleyo kwiphondo lonke ngokuthi kususwe iziseko zophuhliso ezindala nezingamabunga.
Somlomo Obekekileyo namalungu abekekileyo, sinexanduva lokunikeza iinkonzo ezingenachaphaza kubantu abazizigidi ezi-6.6. Senza oko sinako ukuba siyoyise le mingeni sijongene nayo siliSebe lezeMpilo. Ndikholelwa ukuba ngezinkqubo nezicwangciso esizibekileyo, izinto azimntaka ngqika yaye sisendleleni elungileyo.
Siyayazi into yokuba kweli candelo sisebenza kulo umsebenzi awugqitywa, kodwa noxa kunjalo, amanyathelo esiwathathayo aye esisondeza ekufikeleleni kwabantu bonke kwinkonzo yezempilo efanayo. Iinkqubo zeThuma Mina zingumfuziselo wembophelelo yethu ekukhathaleleni uluntu lwaseMpuma Koloni.
Njengoko siqhubeka nokuthi gqolo silungisa silungisa indlela esiqubisana ngayo mihla le nobhubane iCovid-19, siqhubeka nokumane sigqwathula ikhasi kwindlela ekwakuqutyiswene ngayo ngaphambili nezifo ezaqhumbakayo nesifo sephepha. Amazwi athethwa nguGqirha Nelson Mandela kumyalezo wakhe ngoMhla weSifo Sephepha eHlabathini “Into engundoqo ekulweni isifo sephepha kukuvundlisa abantu ngeempawu zaso nokukhuthaza abo bosulelekileyo ukuba bakhangele unyango” ayangena kulo bhubhane.
Somlomo Obekekileyo, ndivumele ndithi thaca Icebo Elicwangcisiweyo lika-2020/21 – 2024/25 neSicwangciso Sokulondla Ukusebenza Saminyaka le neSicwangciso Samanyathelo sika-2020/21.
Iguqulelwe nguNkosekaya Hlitane